The Voice Journal – Page 391 – The Voice Weekly Myanmar
Business / Stock
ကျရိပ်ပြ ရှယ်ယာဈေးကြောင့် အရောင်းအဝယ်သွက်ဆဲ စတော့အိတ်ချိန်း
စတော့အနှစ်ချုပ် (ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ) ကုမ္ပဏီများ၏ အမြတ်ဝေစုခံစားခွင့်ရှိမည့်ရက်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ရှယ်ယာဈေးများ ကျဆင်းလာသည့်အတွက် ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်မှာ ယခုသီတင်းပတ်တွင်လည်း သွက်လက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုသီတင်းပတ်တွင် ရှယ်ယာအစုပေါင်း ၅၇ç၀၀၀ နီးပါး၊ တန်ဖိုးကျပ်သန်း ၅၇၀ ခန့်...
Entertainment / Interviews / Lifestyle
“ ခေတ်ကာလအရကတော့ Electro Music တွေက ပရိသတ်ကြိုက်ပြီးတော့ ရေပန်းစားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တိမ်တွေနေတဲ့အရပ် လုပ်တုန်းကလည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာမျိုးဆိုတော့ ကံကောင်းထောက်မ စွာနဲ့ ပရိသတ်အကြိုက်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ မမကတော့ ကိုယ့် Theme ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်း ဒုတိယအခွေကို သွားမှာပါ”...
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဦးလှစောနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Voice – မောင်တောမှာ ရဲစခန်း၊ ရဲကင်းစခန်း ၃၀ တစ်ပြိုင်တည်း တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပေါ် ဘယ်လို သုံးသပ်လဲ။ UHS – ဒီကိစ္စကို ခိုင်မာတိကျတဲ့ မူဝါဒနဲ့ ပြတ်ပြတ်...
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ရဲစခန်း၊ ရဲကင်း ၃၀ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေနှင့် ဆက်သွယ်၍ The Voice က မေးမြန်းထားမှုကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ Voice...
ယခု အိန္ဒိယနှင့်ဖြစ်သည့် ပဲအကျပ်အတည်းတွင်ရော တရုတ်နှင့် ကြုံရလေ့ရှိသည့် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အရေးကိစ္စများတွင်ရော မြန်မာသည် တစ်လှမ်းမက နှစ်လှမ်းသုံးလှမ်း နောက်ကျနေရသည်မှာ ‘ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းအကြောင်း ကိုယ်မသိခြင်း’ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိပဲအကျပ်အတည်းကို ဥပမာအဖြစ် တင်ပြရလျှင် မြန်မာ့ပို့ကုန်၏...
“ဒီညကို ကျော်လွန်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းတယ်”
မောင်တော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပိတ်မိနေသည့် ‘——-‘ ရွာမှ ဆရာမဒေါ်သန်းသန်းဌေးနှင့် မေးမြန်းခြင်း The Voice : အခုတိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေတွေ ဘယ်လိုရှိလဲ။ ပစ်ခတ်တာတွေ ရှိနေဆဲလား။ DTTH : အခုတော့ ပစ်ခတ်သံ ဆက်တိုက်ကြားနေရတယ်။ ရခိုင်ရွာက...
The Voice Weekly Journal PDFs
The Voice Weekly 13/29
လျှပ်စစ်ပြဿနာအကြောင်းကို ကျွန်တော် သိပ်စာရေးချင်စိတ် မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်မှ နားမလည်ဘဲခင်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သိပ်ခက်ပါတယ်။ ဒီနေ့က မိုးတွင်း …။ နောက်သုံးလကျော်ရင် ဆောင်းရောက်တော့မယ်။ ဆောင်းပြီးရင် နွေရောက်တော့မယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နွေက ဘယ်လောက် ပြင်းထန်ရက်စက်နိုင်တယ်...
ချားလော့ဗီးသည်အစဟု လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီ သတိပေး
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးပြီး လူပေါင်းများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် ချားလော့ဗီးဖြစ်စဉ်အပြီးတွင် နောက်ထပ်ဆန္ဒပြပွဲများ ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်၊ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို တိုးမြှင့်ရန် အတင့်ရဲလာသည့် လူဖြူအမျိုးသားရေးဝါဒီများက ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည်။ လာမည့်လအတွင်း ဖလောရီဒါတက္ကသိုလ်တွင်း၌ ဟောပြောခွင့်ပြုရန် လူဖြူဝါဒီသမားရစ်ချက်စပန်စာ တောင်းဆိုသည်ကိုလည်း တက္ကသိုလ်က ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိပေ။...
Page 391 of 424« First«...102030...389390391392393...400410420...»Last »